तपाईं स्पेन खर्च गर्न दुई हप्ता छन् भने, वरिपरि प्राप्त गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका को एक ट्रेन द्वारा स्पेन अन्वेषण गर्न छ. मात्र यो देश वरिपरि केही अविश्वसनीय ठाँउहरु हेर्न अनुमति दिन्छ, तर स्पेन रेल यात्रा धेरै कुशल र सजिलो छ. मुश्किल भाग रेल टिकट खरीद छ. किन्न सबैभन्दा राम्रो तरिका तपाईंको रेल टिकट ट्रेन द्वारा स्पेन यात्रा गर्न अनलाइन छ. त्यहाँ धेरै वेबसाइटहरू छन् जुन तपाईंलाई यो गर्न अनुमति दिन्छ. प्रमुख प्रयोग मा सजिलो सर्तहरू मा तपाईं को लागि राम्रो काम गर्छ भन्ने एउटा फेला पार्न छ, भाषा, र बजेट. आफ्नो टिकट खरीद प्रारम्भिक तपाईं लिन अनुमति दिन्छ फाइदा पक्का सम्भव विशेष दर साथै उनीहरूले पूर्णतया बुक बन्न अघि तपाईं गर्न चाहेको रेल मा प्राप्त.
अगाडि योजना र प्राप्त गर्न अग्रिम मा आफ्नो टिकट आदेश तपाईंको रेल यात्रा को बाहिर सबै भन्दा राम्रो. यो एक नजर दुई-हप्ता यात्रा ट्रेन द्वारा स्पेन वरिपरि यात्रा को लागि. यो तपाईंको अर्को यात्राको लागि एक पुस्तिका होस्.
यो स्पेनिश राजधानी हो र यो दुवै पुरानो र नयाँ एक राम्रो मिश्रण छ, सुरुचिपूर्ण पार्क संग, अविश्वसनीय किनमेल, vibey नाइटलाइफ र को पाठ्यक्रम Malasana क्षेत्र. मैड्रिड स्पेन शीर्ष संग्रहालयहरु धेरै घर पनि छ. धेरै घर अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता काम. धेरै छ किनभने त्यसैले यो शहरमा गर्न आफ्नो3दिन यहाँ राम्रो-खर्च हुनेछ. यसलाई आफ्नो दुई-हप्ता यात्रा एक राम्रो सुरुवात हो र एक रेल प्राप्त गर्न सजिलो यहाँ पनि ठाउँबाट गर्न. म्याड्रिड एटोचा रेलवे स्टेशन हो जुन रेन्फेले आधिकारिक रेलवे कम्पनीमा जान्छ, र यो रेलवे स्टेशन सबैभन्दा सुन्दर मध्ये एक हो स्पेन मा रेल स्टेशन.
यो शहर विवादास्पद को घर हो को बुल्स को चलिरहेको जुन हरेक बर्ष जुलाई मा हुन्छ, तर त्यहाँ धेरै यो भन्दा प्यामप्लोना थप छ. यसलाई जो त्यहाँ को अविश्वसनीय दृश्य हो मतलब Navarre प्रान्तमा एक पहाडी को शीर्ष मा स्थित गर्नुपर्छ पहाड र घाटिहरुमा तल. शहर सानो छ सजिलो वरिपरि र हिंड्न र सुन्दर वास्तुकला लिन बनाउँछ जो इतिहास. त्यहाँ एक जीवन्त बार र वर्ष भर तपस दृश्यहरु छन्. पुरानो टाउन मार्फत एक पैदल सम्झना छैन वा बुल्स को दौड समयमा लिएको मार्ग retracing. अन्तमा, यो शहर पनि बाट सजिलै पहुँच छ सनसेबास्टियन र छोटो रेल सवारी टाढा.
यो सागर शहर स्पेन मा सबैभन्दा प्रसिद्ध र लोकप्रिय शहरहरु मध्ये एक हुनु पर्छ, र यो निराश छैन! चाहे तपाईं कला र संस्कृति खोजिरहेको, वास्तुकला, अन अल्छी दिन समुद्र तट, सबै रात पार्टीहरु, वा मात्र एक नयाँ शहर को अन्वेषण, त्यहाँ बार्सिलोना सबैका लागि कुरा हो. को Sagrada परिवार नछुटाउनुहोस्, जो आधुनिक संसारको सबैभन्दा नाटकीय संरचना को छ. ट्रेन द्वारा स्पेन बार्सिलोना गर्न प्यामप्लोना देखि बारम्बार रेल प्रदान गर्दछ र मात्र एक छ चार घण्टे यात्रा दुई शहर बीच.
एक संस्कृति एक भू-मध्य महसूस संयोजन आधुनिक कला ट्रेन द्वारा स्पेन यात्रा र विकास सम्भव छ, मैलेंगा स्पेन गरेको दक्षिणी कोस्टा डेल सोल मा पाउन सकिन्छ. शहर को केन्द्र नयाँ पुनर्स्थापित गरीएको छ र एक संयोजन गोथिक कैथेड्रल र संकीर्ण मध्यकालीन पैदल यात्री सडकहरु संग आधुनिक बारहरू र हिप रेस्टुरेन्ट. मैलेंगा भ्रमण गर्न केही साँच्चै अविश्वसनीय तटों र यसलाई वरपरका सुंदर पहाड छ. को Gibralfaro गर्न चढाई सम्झना छैन महल भव्य Andalusian सूर्यास्त र शहर को सास लिने दृश्यहरु को लागी. त्यहाँ भ्यालेन्सिया देखि मैलेंगा गर्न दैनिक चलिरहेको रेलका छन्.
ओस्लो मात्र मैलेंगा देखि छोटो रेल सवारी र बस रूपमा शानदार छ. को नजर को एक विचार प्राप्त र धेरै ऐतिहासिक अवधि तत्व जोडती यो शहर को महसुस गर्न फिर्ता रोमन साम्राज्य गर्न लाग्छ. त्यहाँ शहर मा गर्न धेरै छ, को Arenal चौथाई साथ भटक शहर अन्वेषण देखि नदी गएर गर्न शानदार रेस्टुरेन्ट वा सहरका ऐतिहासिक घन्टी मा एक गोरु जुदाई हेर्दै. ओस्लो गरेको गिरजाघर र Alcázar एउटा यात्रा नछुटाउनुहोस्, जुन हिट टिभी शो गेम अफ थ्रोन्स का दृश्यहरु लाई फिल्म गर्न को लागी प्रयोग गरीएको थियो. जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ दैनिक मैलेंगा देखि ओस्लो र ओस्लो फिर्ता मैड्रिड गर्न चलान गाडिहरु.
तपाईं अन्य आवश्यक छ भने युरोपेली ट्रेन टिकट, बस क्लिक यहाँ र हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस् र सवारी आनन्द.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspain-by-train%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml र तपाईं / डी वा / RU र अधिक भाषा गर्न / ES परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
रेल रेल यात्रा travelspain